Maxuu yahay ID-ga gaarka u ah ee loo adeegsado raadinta xiriirka?
Aqoonsiyada caamka ah ee gaarka loo leeyahay waa nambarada ka kooban xarfaha iyo nambarada. Kuwani waxa lala wadaagaa inta u dhexeysa taleefannada waxayna isbeddelaan 15 illaa 20 daqiiqo kasta. Looma isticmaali karo in lagu garto isticmaaleyaasha ama taleefannadooda.
Ma tirtiri karaa appka?
Waxaad had iyo jeer awood u yeelan doontaa inaad tirtirto appka markasta oo aad rabto. Xogta qaar ayaa hadhaysa, sida lagu go'aamiyay nidaamka hawlgalka taleefankaaga, laakiin appka iyo xogta ay ka koobantahay waa la tirtirayaa.
Markaad tirtirto barnaamijka, ma heli doontid ogeysiisyo ama Ogeysiiso.
Miyaan tilmaami karaa isticmaale isticmaaley oo laga helay cudurka coronavirus (COVID-19)?
Maya. Appku kuuuma ogolaanayo inaad ugaato app isticmaale kasta oo laga hilo cudurka coronavirus. Aqoonsiyada gaarka ah ee loo yaqaan 'Random IDs' ayaa loo isticmaalay si loo hubiyo in aqoonsiga iyo asturnaanta qof kasta oo isticmaalaya barnaamijka la ilaaliyo.
Si kastaba ha noqotee, isticmaaleyaasha waxaa lagula talinayaa inay ilaashadaan taleefankooda maadama Ogeysiisaha ku saabsan barnaamijka ay u muuqan doonaan kuwa gali kara taleefankaaga.
Appku ma daadin doonaa baytarigayga?
Barnaamijku wuxuu adeegsadaa "Bluetooth Low Energy" wuxuuna ku yeelan doonaa saameyn yar batterigaaga moobiilka, gaar ahaan haddii aad caadiyan awood u leedahay Bluetooth.
Muxuu appku ugu baahan yahay khoodhka boostada degmadayda?
Markaad soo degsato barnaamijka waxaa lagu weydiisan doonaa inaad soo dirto koodhka boostada degmada. Tani waxay ka dhigan tahay in qaybta ugu horreysa koodhkaaga boostada lala wadaago NHS.
Koodhka boostada degmada guud ahaan waxaa ku jira ilaa 8,000 cinwaan, taas oo macnaheedu yahay in goobtaada gaarka ah aan la aqoonsan karin.
App-ka ayaa u adeegsan doona degmada boostadaada inuu kuu sheego haddii aaggu halis ku jiro.
Adeegga Caafimaadka Qaranka (NHS) ayaa u adeegsan doona koodhka boostada degmada inay:
saadaalinta iyo maareynta adeegyada cosbitaalka maxalliga ah
in la wanaajiyo barnaamijka appka oo la hubiyo in ay shaqeyneyso
Aaladda ma shaqeyn doontaa haddii taleefankayga xiran yahay?
Barnaamijku wuu shaqeyn doonaa inta taleefankaagu oo qufulan yahay, illaa iyo inta taleefanka la demiyo oo Bluetoothku aano shaqeyn. Waxa taas ka reeban waa haddii aad hadda dib u bilawday taleefankaaga, waa inaad marka hore furta taleefanka si aad u kiciso appka si oo u bilaabo shaqo. Tan waxaa looga baahan yahay oo keliya marka aad dib u bilawday taleefankaaga oo umana baahnid inaad furto barnaamijka.
Maxaan ugu baahanahay inaan daaro ogeysiinta?
Ogeysiinta waxaa loo isticmaalaa astaamaha qaarkood ee barnaamijka si ay u shaqeeyaan, sida raadinta xiriirka. Haddii aad waqti ku qaadatay ku dhowaad isticmaale kale oo tijaabada ka hubiya cudurka loo yaqaan coronavirus, taleefankaagu wuxuu adeegsan doonaa ogeysiisyada si uu kuugu soo diro ogeysiis Fadlan ku darso ogeysiisyada haddii lagaa codsado inaad sidaas sameyso.
Ma u baahan tahay Bluetooth si uu appku u shaqeeyo?
Haa. Barnaamijka appku wuxuu u adeegsadaa "Bluetooth Low Energy" inuu ku shaqeeyo. Markii aad soo dejisan lahayd app-ka, waxaad u baahan doontaa inaad u oggolaato adeegga “Ogeysiiska Muujinta” ee ka imanaya Apple iyo Google.
Tani waa sababta oo ah Bluetooth waxay u oggolaanaysaa appkaaga inuu duubo aqoonsiga isticmaaleyaasha kale ee waqti adiga ku ag joogay. Tan waxaa loo yaqaanaa "Diiwaan gelinta Soo-gaadhista" iyo tikniyoolajiyaddan waxay ka dhigaysaa raadinta xiriirka mid shaqaysa illaa iyo inta taleefanka Bluetooth-kaagu uu weli shaqeynayo.
Goorma iyo sababtee ayaan ugu baahanahay inaan iska diiwan galiyo goob?
Hadaad gasho goob (tusaale ahaan, dukaan, makhaayad ama meel la isku qurxiyo) oo albaabka laga galo ku leh sawirka lambarka QR ee rasmiga ah ee NHS, waa inaad iskaanisaa lambarka QR-ka adoo adeegsanaya kaameeraha adigoo adeegsanaya barnaamijkaaga.
Waxaa lagugu soo jeedin doonaa farriin aad ku siiso ogolaanshahaaga kahor intaan la adeegsan.
Ka dib waxaad heli doontaa ogeysiis, haddii aad dhowaan booqatay goob ay dhici karto inaad la xiriirto coronavirus (COVID-19).
Maxaan ugu baahanahay inaan casriyeeyo nidaamka taleefankayga ee shaqo galinta?
Si app-ka NHS COVID-19 uu u shaqeeyo, waxaad u baahan doontaa nooca ugu dambeeyay ee nidaamka hawlgalka taleefankaaga ee lagu rakibay.
Taleefannada Apple, waxaad u baahan doontaa noocyo 13.5 ama ka badan. Telefoonada Android waxay u baahan doonaan Marshmallow ama nooca 6.0 ama ka sareeya.
Tilmaamo ku saabsan taleefannada kale iyo tilmaamaha sida kor loogu qaado nidaamka hawlgalkaaga, u tag “Su'aalaha Caadiga ah” ee websaydhka: www.covid19.nhs.uk.
Fadlan su'aalo kaloo caadi ah oo af Ingiriisi ku qoran ka eeg halkan faq.covid19.nhs.uk
Hore : Waxa uu app-ku sameeyo
Xiga : Shuruudaha isticmaalka